‘लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्ने सरकारी निर्णय गलत’
बिहिबार, ११ भदौ, २०७७ 0प्रतिक्रिया
काठमाडौं, ११ भदौ । लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएका कोरोना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन् ।
परीक्षणलाई नजरअन्दाज गर्दा संक्रमितले अरुलाई सार्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ । संक्रमितको १० दिनपछि परीक्षण गर्नु ठिकै भएपनि सामान्य लक्षण भएका र लक्षण नभएका बिरामीलाई १४ दिनपछि परीक्षणबिना घर पठाउनु नेपालको परिवेशमा सही नभएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समीरमणि दीक्षितको भनाइ छ ।
पहिलो पटक कोरोना देखिएको चीनमा समेत ३० दिनसम्म पनि भाइरस निष्कृय नभएको परिवेशमा नेपालमा १४ दिनमाबिना परीक्षण छोड्ने निर्णय पूर्ण रूपमा लगत भएको उनले बताए ।
यता सरकारले भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० दिनपछि कुनै पनि संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण हुँदैन भन्ने तथ्यहरू पेश गरेर निर्देशिका बनाएपछि सोहीअनुसार निर्णय गरिएको बताएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले डब्ल्यूएचओको निर्देशिकालाई आधार बनाएर मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरिएको बताए । लक्षण नभएका व्यक्तिको हकमा १४ दिनपछि परीक्षण नगरी घर पठाउँदा कुनै समस्या नहुने उनले बताए ।
उनले भने, ‘लक्षण नभएको व्यक्तिको हकमा १४ दिनपछि परीक्षण नगर घर पठाउँदा कुनै समस्या हुँदैन । अरु व्यक्तिलाई संक्रमण हुने सम्भावना हुँदैन । तथ्यहरूले १० दिनपछि संक्रमण हुँदैन भन्छ तर हामीले ४ दिन थपेको अवस्था हो । लक्षण छन् भनेपनि लक्षण हराएको ३ दिनपछि संक्रमण फैलिने सम्भावना हुँदैन । परीक्षण भनेको संक्रमणको चक्रलाई रोक्न हो ।’’
जनस्वास्थ्य विज्ञ दीक्षित दिने उनको भनाइमा असहमति जनाउँछन् । तराईका जिल्लाहरूमा क्वारेन्टाइनबाट परीक्षण नगरी घर पठाउँदा अहिलेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले १५ दिनपछि पोजेटिभ हुँदैन भन्ने सोचले उपत्यका तराइको जस्तो अवस्था देशभरि हुने चेतावनी दिए ।
नेपालको परिवेशमा कुनै अनुसन्धान नै नगरी १५ दिनमा भाइरस शरीरमा रहँदैन भन्न नमिल्ने उनले बताए । सरकारले पैसा र बेड बचाउनका लागि गरेको निर्णयले भोलि हजारौँ बेड थपिने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी उनले दिए ।
उनले भने, ‘पाँच दिनपछि पोजेटिभ हुँदैन भन्ने सोच्न थाल्यौ भने काठमाडौं र तराईका जिल्लाको जस्तै अवस्था देशभरि हुन्छ । अनुसन्धान नै नगरी १५ दिनमा भाइरस जीउबाट गएको भन्न मिल्दैन । बेड बचाउन र पैसा बचाउन गर्न खोज्या होला तर एउटा बेड बचाउन गरिएको निर्णयले भोलि हजारौँ बेड थपिने अवस्था आउन सक्छ ।’’
अर्का जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डे पनि परीक्षण नगरी संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आपतकालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्चालन केन्द्रले सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र देशभरिका कोभिड अस्पताललाई पत्राचार गरी १० दिनमा पीसीआर गरी पोेजेटिभ आएमा लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई थप ४ दिन राखेर परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गर्न भनेको थियो ।
१४ दिनपछि डिस्चार्ज नगरिए सरकारले सोधभर्ना नव्यहोर्ने चेतावनीसहित मन्त्रालयले कोभिड अस्पताल र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो ।